मतदाता परिचयपत्र हराएमा मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? र नयाँ मतदाताले कसरी पाउने त परिचयपत्र ?? - सिधा मिडिया
मतदाता परिचयपत्र हराएमा मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? र नयाँ मतदाताले कसरी पाउने त परिचयपत्र ??
२४ बैशाख २०७९, शनिबार १६:५४ मा प्रकाशित
2575 जनाले पढ़िसके
आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा देशभरिका मतदाताले मतदान गर्न पाउन अब केहि दिन मात्रै बाँकी छ । वैशाख ३० गते देशैभरि एकै चरणमा हुन लागेको चुनावका लागि त्यसको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता छन् ।